Baan Kii-muun mootummaan Itoophiyaa mirga ummataa kabajuu qaba jedhu - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Baan Kii-muun mootummaan Itoophiyaa mirga ummataa kabajuu qaba jedhu
Baan Kii-muun mootummaan Itoophiyaa mirga ummataa kabajuu qaba jedhu
Baan Kii-muun, mataan Mootumoota Gamtoomanii, mootummaan Itoophiyaa mirga labbii biyyattii akka kabaju gaafate. Baan Kii-muun haala Itoophiyaa yaaddoo guddaan kan hordofaa jiran, akka dubbataa isaaniitti.
Baan Kii-muun yaada isaanii kana kan laatan labsii yeroo muddamsuu Woyyaaneen baaste hordofeeti. Keessumattuu labsiin kuni humni waraanaa daandii irraa ummata guuraa akka hidhuuf hayyamuu fi intarneetii ummata irratti cufuun hedduu yaachisaa ta’uu Baan Kii-muun ibsaniiru.
Rakkoo biyyattiif fala arguudhaaf mariin badhaan qaamota siyaasaa biyyattii hunda hirmaachise godhamuu qaba jedhan, Baan Kii-muun.
Labsii yeroo muddamsuu Woyyaaneen muddamtee labsite kana addunyaa mara irraa qeeqaa fi balaaleffannaan cimaan mudataa jira.
labsii yeroo mudamsuu
Previous articleWoyyaaneen labsii yeroo hatattamaa labsitee kufaatiin isii kalaayuu hundaaf mirkaneessite
Next articleLabsii Woyyaanee cabsuudhaan tooftaan ukkaamsaa akka hin hojjanne agarsiisuu fi abdii isii kutachiisuun barbaachisaa ta’a